Wasiir ku Xigeenka Arimaha Dibadda oo loola dhaqmay si Xeerka ka baxsan - Latest News Updates
Wasiir ku Xigeenka Arimaha Dibadda oo loola dhaqmay si Xeerka ka baxsan
Wasiir ku Xigeenka Arimaha Dibadda oo loola dhaqmay si ka baxsan xeerarka Dalka, nidaamka Dimoqratiyada iyo xuquuqda Muwaadinka.
Xisbiga Dimoqratiga B.DEM wuxuu si adag u cambaaraynayaa ficilka foosha xun oo wuxushnimada ah oo lagula dhaqmay mas’uul sare ee ka tirsan Golaha Wasiirada ee Dowlada Federalka Soomaaliya Wasiir ku Xigeenga Arimaha Dibadda mudane Mukhtaar Mahad Daahir si ka baxsan qawaaniinta iyo xeerka Dalka kana fog ku dhaqanka iyo dhowridda nidaamka Dimoqratiga oo aan waddadeeda ku dhaqaaqnay dhiig badana loo daadshay iyo xuquuqda uu muwaadinka leeyahay.
Aad baan ugu xunahay dhaawaca loo gaystay sharafta iyo karaamada Wasaarada Arimaha Dibadda ee leedahay iyo mas’uuliyiinteeda sare.
Marnaba raali kama noqon karno ficilka uu ku dhaqaaqay Xeer Ilaaliyaha Guud oo ka fog qawaaniinta Dalka iyo dhaqanka foosha xun uu kula dhaqmay mas’uul sare sida Wasiir ku Xigeenka Arimaha Dibadda.
Waxaan sugaynaa Maxkamada Sare waxay ka tiraahda habdhaqanka Xeer Ilaaliyaha oo aan u aragno ixtiraam darro oo ku habooneen in lagula dhaqmo mas’uul sare iyo hadii ciidamada uu Xeer Ilaaliyaha adeegsaday ay wateen amar qoran.
Dambiyada la leeyahay Wasiir ku Xigeenka ayaa lagu soo oogay oo ay ka mid yihiin
1-Ku xadgudub Xatooyo Xoolo Dadweyne.
2-Ku xad gudub awood xafiiseed.
3-Ku daneysi shaqsiyadeed howlo Xafiiseed
iyo diidid howlo Xafiiseed.
4-Ku xadgudub xafiiska Wasiirka Arrimaha
Waxaanu sugaynaa in dhamaan eedaymahaan uu Xeer ilaaliyaha iyo Hanti Dhowrka Guud ku soo oogeen Wasiir ku Xigeenka Arimaha Dibadda ay si aan mugdi lahayn ugu soo bandhigaan Maxkamada Sare.
Waxaan si adag ugu codsanayna Maxkamada Sare in ay ilaaliso xuquuqda, sharafta iyo karaamada Wasiir ku Xigeenka.
Waxba tari mayso in saxaafada la hor yimaada oo wixii doono layska sheego iyadoo Soomaaliyoo dhan ogtahay in shaqada Xeer Ilaaliyaha aysan dhaafsaneen labada kontrol ee Gobolka Banaadir.
Xisbiga Dimoqratiga B. DEM marna ogolaan maayo kamana aamusaayo in lagu xad gudbo xuquuda,sharafta iyo karaamada muwaadanka iyo in la baal maro sharuucda Dalka.
Marna Xisbiga ogolaan maayo hab dhaqan Dictatooriyadda iyo awood u sheegasho in lagula dhaqmo muwaadaniinta soomaaliyeed.
FG. Sababta ay u dhaceen dagaalada sokeeye waa in maanka lagu wada haayaa oo aan lagu deg degin awood adeegsi, cagajugleen, ciidan loo adeegsadaa arimo shaqsiyeed waxaaso idil waa tii lagu hungoobay, in haddana laysku dayo dib u soo celin waa dabaalnimo.
Soomaalida waxay ku maahmahdaa :
“Lax dhunkani abaar moog”
Xisbiga Dimoqratiga B.DEM